Masturbagid xiriirka khilaafka ah ee khilaafka ah?
Isbedelka wada-shaqeynta sidoo kale wuxuu isbeddelaa galmada
Ka wada hadalka masturbalka
Mawduuca ku qanacsanaanta xidhiidhka waa hubaal mid ka mid ah mawduucyada ugu nugul ee jinsiga ee wada shaqeynta.
Qeexitaano kala duwan ee naqshadeynta
Inkastoo hal mar ay badanaa tahay fursadda kaliya ee lagu nasto jinsiga, dadka badankood waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in xiriirka, mid ka mid ah uu ku oofanayo oo kaliya la shaqeynta qofka kale.
Mastuufka Iskaashatada Iskaashatada Waalid ama Lamaane?
Ma ahan dad yar, waxay ku xidhan tahay khiyaamo marka uu rafiiqu isku kalsoonaado xiriirka. Mawduuca waa in wax laga qabtaa nasasho badan.
Dadka intooda badan, masturbaygu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah jinsiyadooda. Ma aha oo kaliya adeega baaritaanka mid ka mid ah jirkiisa, dareenka qoto dheer ee dareenka galmada, laakiin xaaladaha qaarkood ayaa si fudud loo sii daayo cadaadiska maahmaahda.
Ka dib oo dhan, waxaa si caan ah loo cadeeyay in orgasm, gaar ahaan waqtiyada walaaca, waxay yeelan karaan saameyn xooggan oo ku saabsan jirka iyo maskaxda. Haddii aanad xiriir la laheyn waqti dheer, waxaad inta badan isticmaashaa isku-qanacsanaanta waqti dheer si aad u hesho nasasho iyo farxad.
Isbeddelka is-kaashatada ayaa badanaa si toos ah uula dhaqmaya isbeddel xoogan oo ku dhaca nolosha jinsiga
Gaar ahaan bilawga xiriirka, dadka intooda badani waxay leeyihiin jinsi aad u badan oo is-raalli ahaansho aan loo baahnayn oo gebi ahaanba lagu bedelay xiriir dhow oo lala yeesho lammaanaha. Laakiin taasi way isbeddeli kartaa inta uu socdo xiriirka.
Haddii nololmaalmeedku bilaabo iyo inta jeer ee hoos u dhaca jinsiga, waxaa suurtagal ah in lammaanuhu uu gaaro mar kale habka masturbalka. Sababaha tani waa mid kala duwan. Dhinaca kale, waxaa jiri kara rabitaan dheeraad ah. Xaaladaha dhibaatada ah ee xiriirka, gaar ahaan sababo la xiriira cadaadiska, waa caadi. Si kastaba ha ahaatee, dad badan, jinsiga iyo qanacsanaanta ayaa ah baahi aasaasi ah. Su'aashu waa sida loola dhaqmi karo shaygan.
Masturbate leh xitaa lammaane?
Masturbo miyuu khiyaaneeyaa kufsiga?
Dhibaatada kaliya ee dhabta ah ee mawduucani waa, sida had iyo jeer, laguma hadlin. Inkastoo lamaane kasta uu tixgelin karo niyadjabnimada habka ugu haboon ee lagu yareyn karo cadaadiska, dhinaca kale ee iskaashatadu waa khiyaanada xiriirka.
Kadib, waxay tilmaamaysaa la'aanta wax soo jiidasho la'aan, maqnaansho la'aanta marka loo eego galmo wada jirka, ama calaamad muujinaysa in aan la isku khilaafin xidhiidhka. Sababtoo ah maaha qofkoo dhan waa masturbay ficil saafi ah oo farxad gaaban.
Wixii iyaga ka mid ah waxay la xidhiidhaan isdhexgalka intaa ka badan iyo qorshe qoto dheer oo isdaba-joog ah waa in lala wadaago xiriirka lala yeesho lammaanaha. Waxaa sidoo kale jira qaybo sida pornography, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo niyad-jebinta iyo xoojinta dareenka khayaanada.
Sida badanaa xiriirka, xallinta dhibaatadan oo kale ayaa ku jirta bartamaha - iyo isgaadhsiinta u dhaxeysa lamaanayaasha.
Masturbalku waa dad badan oo caadi ah iyo qayb caadi ah oo ka mid ah nolosha qofka. Sida laga soo xigtay baadhitaanada xitaa lamaanayaasha leh jinsiyo badanaa waxay leeyihiin rabitaan ah in ay "gacmahoodu isku qabtaan".
Sababaha waa sida, sida kor ku xusan, kala duwanaasho badanaana kuma laha wax aan ku qanacsanayn lammaanaha ama nolosha jinsiga. Waxa kaliya oo muhiim ah in wadahadal lala yeesho lammaanaha ku saabsan mawduuca oo nadiifiya wixii hubin la'aan ah oo ay sababtay xaalad sidan oo kale ah.
Masturbalka ma aha inay dhibaato noqoto, sababtoo ah dadka naftooda lihi waxay badanaaba dareemaan jirdhis wanaagsan. Tani waxay faa'iido u tahay galmada caadiga ah waxayna ka dhigtaa mid sii fiican. Haddii aad la hadasho lammaanaha ku saabsan mawduucan, waxaad samayn kartaa tallaabo muhiim ah oo ku saabsan xiriirkaaga.